🥇 ▷ RedmiBook 14 waxay jabisay diiwaanada iibka markay soo saartay Shiinaha ✅
RedmiBook 14 waxay jabisay diiwaanada iibka markay soo saartay Shiinaha
Nooca hoose ee ‘Xiaomi’ oo aan u naqaanno Redmi, wuxuu bilaabay suuqgeyntiisa cusub RedmiBook 14 shalay, kombiyuutar la qaadan karo oo leh astaamo aad u wanaagsan laakiin leh qiime aad u badan oo la heli karo.
Iyo sidii la filayay, maalintiisi ugu horeysay ee iibka wuxuu helay rikoor iib ah, isagoo cinwaan looga dhigay inuu yahay “guul” uu soo saaray maamulaha shirkadda, Lu Weibing, kaasoo intaas raaciyay inuu si buuxda u maareynayo iibka badeecada isla qeybtaas.
RedmiBook 14 waxay u ahayd guul lahaanshaha naqshad aad u khafiif ah oo qurux badan isla waqtigaas, maadaama ay leedahay dhumucdeedu tahay 17.95mm iyo culeyskeedu yahay 1.5 kilo. Laakiin sidoo kale waxay soo jiidataa dareenkeeda 14-inji oo leh xallin buuxda oo HD ah oo leh cabirka jirka / shaashadda oo ah 81.2%.
Laakiin hadda waxa ugu fiican ayaa imanaya, maadaama gudaha aan ka heli doonno Intel Core i5 ama i7 sideedaad ee sameeyayaal, halka kaydinta gudaha ahi ay tahay nooca SSD waxaana laga heli karaa 256 iyo 512 GB awooda, halka RAM-kiisu yahay 8 GB fidin karo.
Iyadoo la raacayo tilmaamaheeda farsamo, garaafyada ayaa mas’uul ka ah NVIDIA GeForce MX250 kaararka sawirada, waxay leedahay maqalka xirfadeed ee DTS, waxay isku daraysaa xirmada xafiiska ee la dhisay, nidaam ballaaran oo qaboojin heer sare ah marka loo eego tartamayaasheeda, iyo astaamo kale.
Waxaas yaabka leh oo dhan oo aan adiga kuu sheegay ayaa sidoo kale qiimo aad u wanaagsan ka leh wax kasta oo ay bixiyaan. Dalkiisa Shiinaha wuxuu ka iibinayaa $ 577 doolar, qiyaastii CLP $ 400,000 qiyaastii.
Waqtigan xaadirka ah ma ogin in kumbuyuutarkaan la yaaban yahay waxaan ku arki doonaa dhinacyadan, maadaama aysan jirin waqtiyo u dhigma inuu ka tago suuqa Aasiya hadda.
Macluumaadka ka socda Xiaomi Addicts